?Sharciga ayaa qoyara in ay dawladdu iska qabato ciddii dhibaato abuurta? Xildhibaan Saciid Diiriye Waraabe. – Radio Daljir
Diseembar 23, 2012 9:40 b 0
Garowe, Dec, 23, 2012 – Xildhibaan Siciid Diiriye Waraabe oo kamid ah baarlamaanka Puntland ayaaa waraysi uu siiyay Radio Daljir ku sheegay in sharciga u degsan Puntland uusan diidanayn in dawladdu ay iska qabato cid kasta oo ay u aragto in ay liddi ku tahay ammaanka iyo hor u socodka Puntland.
Xildhibaan Siciid Diiriye ayaa hadalkiisa raacsaday in shirarka looga arrinsanayo aayaha Puntland ay qaban-qaabadiisa iyo qorshihiisa leedahay dawladda Puntland, waxaana uu hadalkiisa raaciyay ?Sharciga ayaa qoyara in ay dawladdu iska qabato ciddii dhibaato abuurta?.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in mudada halka sano ah ee lagu muransanyahay ay tahay mid uu qorayo sharciga u degsan Puntland, wuxuuna intaas ku daray ciddii ka soo horjeesata halkaas sano, in ay u arkaan dad dhibaatada Puntland ka shaqeynaya.
Hadalka xildhibaan Saciid Diiriye ayaa kusoo beegmaya xilli xabsiga weyn ee magaalada Garoowe ay ku xiranyihiin mas?uuliyiin uu ka mid yahay nabadoon Yaasiin Cabdi Samad.
Radio Daljir Garoowe.